UMsimang ukhala ngesicoco ‘esidlala impatha’ esiphethwe nguMunyai - Impempe
UMsimang ukhala ngesicoco ‘esidlala impatha’ esiphethwe nguMunyai
USanele "Tornado" Msimang
Uma engalwa ngale ndlela akhuluma ngayo, nakanjani uSanele “Tornado” Msimang engaba wumpetha wakuleli. Lo mshayisibhakela waseNtshanga usecele ukunikwa ithuba lokudla isicoco asibona sifana netswele lempangele elifukanyelwe yisikukhukazi.
UMsimang ulibeke ngembaba elokuthi uThsifhiwa Munyai usiphethe ngephutha isicoco sakuleli esisindweni seLightweight. UMunyai ulwe kahle evikela leli bhande lakhe kuKhaya Busakwe ngempelasonto edlule. Kodwa uMsimango uthi engavuswa ngisho elele afike ambhekise phezulu.
“Okokuqala nje engingakusho wukuthi njengoba iTornado seyibuyele kunombolo 1 ekuklelisweni kwiLightweight ngicela ithuba kophromotha bebonke nje. Ngicela ongakwazi angiqhathe noMunyai.
‘Anginikwe ithuba ngimkhombise
ukuthi yena sekumele ayohlala ekhaya’
“Bengicela banginike usuku ukuthi ngilwa nini noMunyai. Mina ngihlezi ngiyilungele impi. Ngingagxuma ngihlale kuye nakusasa lokhu okusayo,” kusho uMsimang ngomoya ophansi kodwa ogcwele ukuzethemba.
“Ngizohlezi ngilungile, futhi ngisesimweni. Angithi phela ngilindele uphrompotha ozothi ‘Munyai nawe Tornado, ngenani eringini’ bese mina ngenza umsebenzi ofanele,” kuchaza yena.
UMsimang unezimpi ezingu-16, kanti uwine ezingu-13 eziyisikhombisa kuzo ngomngqimuzo. Usahlulwe kwezintathu, ezimbili kuzo bamngqimuza. UMunyai yena useyinkunzi emidwayidwa. Kodwa noma kunjalo, uMsimang umfuna estikini.
“Ngikululngele ukulwela isicoco sakuleli. Leli bhande elikuMunyai lihleli ngephutha nje. Lidinga umpetha wangempela ozokwazi ukulivikela ngendlela efanele. Lihlale ezandleni ezifudumele hhayi lezi zakhe ezibandayo.
“Mina uma selikimi lizobe lisezandleni ezifanele. Kumele alidedele, isikhathi sesimphelele. Usemdala lomuntu ukuthi angalokhu eqhoqhobele isicoco ngoba eswele abazomphuca sona ngikhona.
“Anginikwe ithuba ngimkhombise ukuthi yena sekumele ayohlala ekhaya athume izingane, aphume aphele nje esibhakeleni. Isifikile iTornado manje,” kusho uMsimang sakuchoma.
“Sekuphele iminyaka eyishumi ngagcina ukulwela isicoco. Manje sengikulungele. Yingakho nje kungangiphethe kahle ukuthi isicoco singaphathwa uMunyai pho, ngikhona?
‘Mina ngeke ngiyiqede imizuliswano engu-12 noMunyai’
“Ngesikhathi esivikela angimbonanga eyibhokisa elingangixaka mina. Ngazama ukuphonsa inselelo kuMzonke Fana ngo-2016, akwengenzeka ngokwesifiso sami, uMzonke wahoxa.
“Sengikleliswe phambili kwaze kwakathathu kwiLightweght, kodwa uma sekumele ngithole ithuba lokusihlwitha lingaveli. UMunyai sengimbeke esikalini ngeke aphunyuke. Uma kungavela uphromotha nje ozonginika lelo thuba.
“Mina ngeke ngiyiqede imizuliswano engu-12 noMunyai. Silahlile lesi sicoco. Ngimbonile nje ngempelasonto edlule esivikela ngasho ngenhliziyo ukuthi amathanga azalela abangenamabhodwe. Ngiyamfisa impela.
“Kungiphatha kabuhlungu ukubona izicoco zidlala amabhokisa fana noMunyai thina singenazo. Ngiyasidinga. Uphromotha ozonginika ithuba ngeke aze azisole ngoba uyoba nompetha,” kuphetha uMsimang.
Previous Previous post: Uhlaba ubuthuntu kwezakhe phambili oweSwallows
Next Next post: Uthi ngeyethimba lonke leSundowns indondo yabo uMngqithi